Amazinga otshintshiselwano, iingcaphulo
Amazinga otshintshiselwano Historical zonke iimali ehlabathini ukususela 1992 kude kube namhlanje. ngeetshathi lwangoku sisananelo ngonyaka, ngenyanga nganye engama-20 edlulileyo.
Amazinga otshintshiselwano zangaphandle
Afghani Afghan Amaleki Albanian
Arani Ariary Malagasy
Balboa yasePanama Bangladesh Taka
Barbados dollar Belize dollar
Birr elingumTiyopiya Boliviano Bolivian
Bosnia and Herzegovina uphawu zijikwe Botswana KWIPULA
Busie dollar CFC franc
Chilean Unidad de Fomento Colon Salvador
Cordoba AmaNicaragua Costa Rica colon
Deutsche uphawu Dinar Algerian
Dinar Serbian Dinar Tunisian
Dinar aseIraq Dinar entsha slavia
Dirham yaseMorocco Djibouti franc
Dollar East Caribbean Dollar Namibian
Dollar Zimbabwe Dollar jamaican
Dominican ipeso Dram Armenian
ECU Eliziilari Georgian
Engange Belarusian Escudo Portuguese
Euro Eziikoruna Czech
Falkland Islands phawundi Fiji dollar
Florin Aruba Forint Hungarian
Franc Swiss Franc aseCongo
Franc eyayiseRwanda France frank
Gibraltar phawundi Gourde Haiti
Guernsey phawundi Guinea franc
Gulden Antilliaanse Guyana dollar
Iceland krone Idenariyo Tanzanian
Idenariyo abangamaSomali Idenariyo waseOstriya
Ihryvnia Iikwacha zaseZambia
Indian બિન umgqomo Ipeso Chilean
Ipeso Colombian Ipeso Mexican
Ipeso Uruguayan Ipeso rgentine
Ipeso waseCuba wendlela Iponti Irish
Iponti Sudanese Iponti Sudanese South
Iponti umYiputa Iponti waseSiriya
Iponti yaseLebanoni Isithsaba Danish
Jersey phawundi Jordan Dinar
Kanga Iranian Kanga Omani
Kanga Yemeni Kazakhstani Tenge
Kenya idenariyo Kina
Krona Swedish Krone Norwegian
Kwanza Kwanza entsha Angola
KweSipro phawundi Kyat waseBurma
LEU IsiRomanian LEU Moldova
Lao Kip Laphumelela Korean North
Laphumelela yaseMzantsi Korea Latvian lat
Lenene Brazilian Leone
Lilangeni Lira New Turkish
Lira baseMalta Lire Italian
Malawi iikwacha Malaysin ringgit
Manat Azerbaijani Manx phawundi
Mauritius બિન umgqomo Metical waseMozambique
Naira waseNigeria Nakfa
Ngokweshekele entsha Israeli Ouguiya Mauritanian
Pa`anga Pakistan બિન umgqomo
Pataca macanese Peruvian Nuevo sol
Peseta Spanish Phawundi omhle
Philippines ipeso Quetzal waseGuatemala
Rand Riel Khambodiya
Riyal Qatari Riyal Saudi
Rufiyaa Maldivian Russian engange
SDR (Special ngokuzoba amalungelo) Saint Helena phawundi
Sao Tome and Principe dobra Seychelles બિન umgqomo
Singapore dollar Slovak eziikoruna
Solomon Islands dollar Som Kyrgyzstani
Somoni Tajikistani Sri Lanka બિન umgqomo
Surinam Guilder Surinam dollar
Taiwan dollar entsha Tala
Tolar aseSlovenia Trinidad and Tobago dollar
Troy paaunzi yesilivere Troy ukanti zegolide / igolide electronic)
Turkmenistan manat entsha UAE Dirham
US dollar UShishino Indonesian
Uganda idenariyo Uphawu fin
Uzbekistan isixa Vanuatu vatu
Vietnamesse dong YaseVenezuela Bolivar Fuerte
Yedrarhma Greek Yen
Yuan Zimbabwe dollar
Zloty Polish બિન umgqomo eliseNepal
Encotsheni yoluhlu ye amazinga otshintshiselwano
Imbali yeekowuti kunye namanani otshintshiselwano ngaphakathi 2021.
Imbali yokutshintshiselana kwayo nayiphi na imali yehlabathi 2021 yemihla ngemihla. Imbali yokutshintshiselana kwayo nayiphi na imali yehlabathi 2021 yemihla ngemihla. Imbali epheleleyo yeekowuti zemali zemihla ngemihla kunyaka ngamnye.
Iintelekelelo kunye namaxabiso otshintshiselwano lweemali zehlabathi ze 2020.
Ixabiso lotshintshiselwano okanye iikowuti ze Rand ye 2020 inyanga nganye nangayo yonke imihla. Ixabiso lotshintshiselwano okanye iikowuti ze Rand ye 2020 inyanga nganye nangayo yonke imihla. Imbali yokutshintshiselana kwayo nayiphi na imali yehlabathi 2020 yemihla ngemihla.
Izinga lokutshintsha kwemali, iingqekembe zemali zelizwe ze 2019.
Imbali epheleleyo yeekowuti zemali zemihla ngemihla kunyaka ngamnye. Imbali epheleleyo yeekowuti zemali zemihla ngemihla kunyaka ngamnye. Yonke imihla Rand inqanaba lonaniselwano (isicatshulwa) se 2019.
Imbali yamaxabiso otshintshiselwano kunye neekowuteshini ze 2018.
Imbali yokufumana iingcaphulo zemali yemihla ngemihla nganye 2018. Imbali yokufumana iingcaphulo zemali yemihla ngemihla nganye 2018. Yonke imihla Rand inqanaba lonaniselwano (isicatshulwa) se 2018.
Imbali yamaxabiso otshintshiselwano kunye neekowuteshini ze 2017.
Imbali yamaxabiso otshintshiselwano wazo zonke iimali kuwo wonke. Imbali yamaxabiso otshintshiselwano wazo zonke iimali kuwo wonke. Ixabiso lokushintshana kwemihla ngemihla (isicatshulwa) seemali zehlabathi ze 2017.
Izinga lokutshintsha kwemali, iingqekembe zemali zelizwe ze 2016.
Ixabiso lotshintshiselwano okanye iikowuti ze Rand ye 2016 inyanga nganye nangayo yonke imihla. Ixabiso lotshintshiselwano okanye iikowuti ze Rand ye 2016 inyanga nganye nangayo yonke imihla. Sigcina imbali yazo zonke iimali zemali zemihla ngemihla.
Imbali yamaxabiso otshintshiselwano kunye neekowuteshini ze 2015.
Apha unokufumana inqanaba layo nayiphi na imali ngalo naluphi na usuku. Apha unokufumana inqanaba layo nayiphi na imali ngalo naluphi na usuku. Imbali yehlabathi Rand inqanaba lotshintshiselwano 2015 yemihla ngemihla.
Iintelekelelo kunye namaxabiso otshintshiselwano lweemali zehlabathi ze 2014.
Sigcina imbali yazo zonke iimali zemali zemihla ngemihla. Sigcina imbali yazo zonke iimali zemali zemihla ngemihla. Rand inqanaba lotshintshiselwano kunye nezicatshulwa ze 2014 yemihla ngemihla.
Imbali yamaxabiso otshintshiselwano kunye neekowuteshini ze 2013.
Imbali ye Rand iikowuti zosuku ngalunye lwe 2013. Imbali ye Rand iikowuti zosuku ngalunye lwe 2013. Imbali yokufumana iingcaphulo zemali yemihla ngemihla nganye 2013.
Iintelekelelo kunye namaxabiso otshintshiselwano lweemali zehlabathi ze 2012.
Ixabiso lokutshintsha komhla olungileyo 2012. Ixabiso lokutshintsha komhla olungileyo 2012. Imbali yamaxabiso ehlabathi yemihla ngemihla.
Imbali yeekowuti kunye namanani otshintshiselwano ngaphakathi 2011.
Imbali yamaxabiso otshintshiselwano wazo zonke iimali kuwo wonke. Imbali yamaxabiso otshintshiselwano wazo zonke iimali kuwo wonke. Rand inqanaba lotshintshiselwano kunye nezicatshulwa ze 2011 yemihla ngemihla.
Imbali yeekowuti kunye namanani otshintshiselwano ngaphakathi 2010.
Imbali yehlabathi Rand inqanaba lotshintshiselwano 2010 yemihla ngemihla. Imbali yehlabathi Rand inqanaba lotshintshiselwano 2010 yemihla ngemihla. Apha unokufumana inqanaba layo nayiphi na imali ngalo naluphi na usuku.
Iintelekelelo kunye namaxabiso otshintshiselwano lweemali zehlabathi ze 2009.
Apha unokufumana inqanaba layo nayiphi na imali ngalo naluphi na usuku. Apha unokufumana inqanaba layo nayiphi na imali ngalo naluphi na usuku. Ixabiso lokutshintsha komhla olungileyo 2009.
Imbali yamaxabiso otshintshiselwano kunye neekowuteshini ze 2008.
Imbali epheleleyo yeekowuti zemali zemihla ngemihla kunyaka ngamnye. Imbali epheleleyo yeekowuti zemali zemihla ngemihla kunyaka ngamnye. Ixabiso lotshintshiselwano okanye intelekelelo yeemali zehlabathi ze 2008 inyanga nganye nangayo yonke imihla.
Izinga lokutshintsha kwemali, iingqekembe zemali zelizwe ze 2007.
Ixabiso lokushintshana kwemihla ngemihla (isicatshulwa) seemali zehlabathi ze 2007. Ixabiso lokushintshana kwemihla ngemihla (isicatshulwa) seemali zehlabathi ze 2007. Ixabiso lotshintshiselwano okanye iikowuti ze Rand ye 2007 inyanga nganye nangayo yonke imihla.
Imbali yeekowuti kunye namanani otshintshiselwano ngaphakathi 2006.
Imbali yamaxabiso otshintshiselwano wazo zonke iimali kuwo wonke. Imbali yamaxabiso otshintshiselwano wazo zonke iimali kuwo wonke. Ixabiso lokutshintsha komhla olungileyo 2006.
Ixabiso lokutshintsha kunye nezicatshulwa ze 2005.
Indawo yogcino lwembali yokutshintsha kwemali. Indawo yogcino lwembali yokutshintsha kwemali. Ixabiso lokutshintsha komhla olungileyo 2005.
Ixabiso lokushintshiselana kunye nezicatshulwa zeemali zehlabathi ze 2004.
Ixabiso lotshintshiselwano okanye iikowuti ze Rand ye 2004 inyanga nganye nangayo yonke imihla. Ixabiso lotshintshiselwano okanye iikowuti ze Rand ye 2004 inyanga nganye nangayo yonke imihla. Indawo yogcino lwembali yokutshintsha kwemali.
Ixabiso lokutshintsha kunye nezicatshulwa ze 2003.
Rand inqanaba lokutshintshiselana ngosuku oluchanekileyo 2003. Rand inqanaba lokutshintshiselana ngosuku oluchanekileyo 2003. Ixabiso lokushintshana kwemihla ngemihla (isicatshulwa) seemali zehlabathi ze 2003.
Iintelekelelo kunye namaxabiso otshintshiselwano lweemali zehlabathi ze 2002.
Imbali epheleleyo yeekowuti zemali zemihla ngemihla kunyaka ngamnye. Imbali epheleleyo yeekowuti zemali zemihla ngemihla kunyaka ngamnye. Ixabiso lotshintshiselwano okanye iikowuti ze Rand ye 2002 inyanga nganye nangayo yonke imihla.
Ixabiso lokushintshiselana kunye nezicatshulwa zeemali zehlabathi ze 2001.
Imbali yehlabathi Rand inqanaba lotshintshiselwano 2001 yemihla ngemihla. Imbali yehlabathi Rand inqanaba lotshintshiselwano 2001 yemihla ngemihla. Imbali yamaxabiso otshintshiselwano wazo zonke iimali kuwo wonke.
Izinga lokutshintsha kwemali, iingqekembe zemali zelizwe ze 2000.
Rand inqanaba lokutshintshiselana ngosuku oluchanekileyo 2000. Rand inqanaba lokutshintshiselana ngosuku oluchanekileyo 2000. Ixabiso lokushintshana kwemihla ngemihla (isicatshulwa) seemali zehlabathi ze 2000.
Imbali yamaxabiso otshintshiselwano kunye neekowuteshini ze 1999.
Yonke imihla Rand inqanaba lonaniselwano (isicatshulwa) se 1999. Yonke imihla Rand inqanaba lonaniselwano (isicatshulwa) se 1999. Imbali yokutshintshiselana kwayo nayiphi na imali yehlabathi 1999 yemihla ngemihla.
Izinga lokutshintsha kwemali, iingqekembe zemali zelizwe ze 1998.
Imbali yehlabathi Rand inqanaba lotshintshiselwano 1998 yemihla ngemihla. Imbali yehlabathi Rand inqanaba lotshintshiselwano 1998 yemihla ngemihla. Imbali yokutshintshiselana kwayo nayiphi na imali yehlabathi 1998 yemihla ngemihla.
Imbali yeekowuti kunye namanani otshintshiselwano ngaphakathi 1997.
Yonke imihla Rand inqanaba lonaniselwano (isicatshulwa) se 1997. Yonke imihla Rand inqanaba lonaniselwano (isicatshulwa) se 1997. Imbali yamaxabiso otshintshiselwano wazo zonke iimali kuwo wonke.
Ixabiso lokushintshiselana kunye nezicatshulwa zeemali zehlabathi ze 1996.
Imbali yokufumana iingcaphulo zemali yemihla ngemihla nganye 1996. Imbali yokufumana iingcaphulo zemali yemihla ngemihla nganye 1996. Ixabiso lotshintshiselwano okanye iikowuti ze Rand ye 1996 inyanga nganye nangayo yonke imihla.
Imbali yeekowuti kunye namanani otshintshiselwano ngaphakathi 1995.
Imbali yamaxabiso ehlabathi yemihla ngemihla. Imbali yamaxabiso ehlabathi yemihla ngemihla. Ixabiso lotshintshiselwano okanye intelekelelo yeemali zehlabathi ze 1995 inyanga nganye nangayo yonke imihla.
Izinga lokutshintsha kwemali, iingqekembe zemali zelizwe ze 1994.
Imbali yehlabathi Rand inqanaba lotshintshiselwano 1994 yemihla ngemihla. Imbali yehlabathi Rand inqanaba lotshintshiselwano 1994 yemihla ngemihla. Sigcina imbali yazo zonke iimali zemali zemihla ngemihla.